I-Semalt ichaza indlela yokuvimbela ukufakwa kwe-pop-up ku-Windows
Kusukela ngo-2017, kulungile ukusho ukuthi ubuchwepheshe buwuthathe impilo yethu isikhathi eside manje. I-intanethi manje ixhuma amadivaysi amaningi nakakhulu njalo kwesibili, futhi inani lemininingwane elidlula kulo likhulu kakhulu. Ngokusho kukaLisa Mitchell, iMenenja ye-10 (Semalt yeMpumelelo yoMthengi, leli qiniso liletha amathuba amaningi nezinzuzo, kodwa futhi liza nezinkinga ezimbalwa, okunye okuvame ukucasula kubasebenzisi: ukubhekana nezikhangisi ze-pop-up !
Uma usebenzisa iWindows kwi-PC yakho, ngokungangabazeki uhlangabezane nale nkinga empilweni yakho. Ngemuva kokufaka uhlelo, konke kuhamba kahle, futhi akukho zinkinga nge-pop-ups, eqala ukuvela ngemva kweseshini zokusebenzisa ezimbalwa. Ngemuva kwalesi sikhathi, inkinga iyaba nzima ukubhekana nayo, nakuba kungekho nhlobo kulezi zikhangiso ezihlobene neWindows ngokwayo. Kulesi sihloko, singathanda ukwethula izindlela ezimbalwa zokuxazulula enye yezinkinga ezibaluleke kakhulu zokuphequlula iwebhu: kanjani ukuvimbela izikhangiso ezivela ku-pop-ups.
Ngaphambi kokuba siqale ngokuhlanza, singathanda ukuthatha isikhashana ukuchaza ukuthi lezi zivelaphi zivelaphi. Njengoba bevela ku-Windows, imvelaphi yabo ngokuvamile ikhona kumawebhusayithi afaka i-malware, i-adware noma iPUPs (Izinhlelo ezingenakudingeka). Izinhlelo eziningi zijwayele ukukhiqiza ama-pop-ups azo, okuyingxenye yenkinga. Kungakhathaliseki ukuthi imvelaphi yabo, ukuvimbela ama-pop-up kuyinkqubo emibili yesigaba: kuqala, hlaziya ikhompyutha yakho kunoma iyiphi i-malware noma i-adware, bese usebenzisa izandiso zesiphequluli ukuvimbela ama-pop-up emathrekhi abo.
Nazi izinto ezimbalwa ongazenza:
1..Hlanza uhlelo lwakho lwamafasitela. Ngokujwayelekile, ukusebenzisa uhlelo olujwayelekile lwe-anti-virus njengo-AVG akwanele. Uzodinga ukunakekelwa okhethekile, okwenziwe umsebenzi, njenge-Malwarebytes Anti-Malware, isiqephu sesofthiwe esenzelwe ukuqeda noma iyiphi i-malware ithola kukhompyutha yakho. Ngokufanayo, ungasebenzisa uhlelo olufana ne-AdwCleaner ukususa i-Adware. Lezi zinhlelo zombili zikhululekile ukusebenzisa futhi ziwusizo, zikhumbule uma usebenzisa zona, njengoba ungafuni ukususa into ebalulekile ngengozi noma ngokuvimbela kakhulu.
2. Faka izengezo zokufaka isiphequluli. Iningi lokungezela lisebenza kuma-browsers amaningi: i-Google Chrome, i-Firefox, i-Edge, i-Opera noma i-Safari. Lezi zengezo zihlose ukuhlaziya ithrafikhi nokuvimbela noma yikuphi okuvela ku-pop-ups. Ukulungiselelwa kungatholakala ngaphansi kwemenyu ethi "Okuqukethwe" kokukhethwa kukho kwesiphequluli, futhi kuzwakala into emigqeni ethi "Ungavumeli noma yiliphi isayithi ukuthi libonise ama-pop-up" - lesi sibonelo sisuka ku-Chrome. Nakuba iziphequluli ziza ne-blocker yazo siqu, sincoma ukufaka enye eyengeziwe njenge-Ghostery, iBlock Origin noma i-AdBlock plus.
3. Misa izikhangiso ze-foistware ne-Windows. Kukhona amawebhusayithi asemthethweni afisa ukusebenzisa ama-pop-ups, njengo-Ask, Microsoft Bing noma iGoogle. Lezi zivame ukufaka i-PUPs ngokuzenzakalelayo uma ukhetha inguqulo ecacile yokufaka noma yimiphi imikhiqizo yawo. Kungakhathaliseki ukuthi ukuhlolisisa noma ukuhlola ngesikhathi senqubo yokufaka, noma ukusebenzisa uhlelo olubizwa nge-Unchecky, olungakwenza lokhu ngisho nangemva kokufaka isofthiwe.
Ngaphezu kwalokho, i-Windows 10 ibuye ibe ne-pop-up manje. Akunjengokucasula njengoba abanye, yebo, kodwa unikeza "izinhlelo zokusebenza eziphakanyisiwe" kwimenyu yokuqala. Ukuze ususe lezo, chofoza ngakwesokudla ku-tile bese ukhetha "susa zonke iziphakamiso."
Sithemba ukuthi izinkombandlela zethu zendlela yokukhipha izengezo zizokwenza ngcono kakhulu isipiliyoni sakho sokuphequlula nokubhula iwebhu. Ama-pop-up angenye yezinkinga ezidabukisayo kakhulu okumele zibhekane nazo ngalesi sikhathi, futhi akekho umuntu okufanele ahlupheke ngaphezu kwalokho okudingekile.